कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन नेपालको कस्तो छ तयारी ? Canada Nepal
महिला र पुरुषमा बाँझोपन समस्या : जोगिन ध्यान दिनुपर्ने कुरा र उपचार विधि
काठमाडौं । पछिल्लो समय बच्चा नभएको समस्या लिएर अस्पताल धाउने दम्पत्तिहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । बाँझोपन महिलामा मात्रै हुने भन्ने धारण गलत रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । बाँझोपन समस्या महिला र पुरुष दुवैमा देखिन सक्छ ।
विभिन्न कारणमध्ये जीवनशैलीले पनि बाँझोपनको समस्या निम्ताउने गरेको छ । अत्याधिक मात्रामा धूमपान र मदिरा सेवन, जंक फुडजस्ता कुरा खाँदा पनि बाँझोपनको समस्या बढाउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
विवाह गरेको पहिलो वर्ष परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गर्दा पनि बच्चा नभएको अवस्थालाई बाँझोपन भनिन्छ । विवाह भएको पहिलो वर्ष परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गर्दा ८५ दम्पत्तिको बच्चा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
बाँझोपन हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
गर्भ नरहँदा दम्पत्तिहरुमा तनाव सृजना हुने गर्छ । सन्तान प्राप्तिका लागि दम्पत्तिहरु विभिन्न उपाय खोजिरहेका छन् । बाँझोपनबाट जोगिन सुरुमा मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेन चिकित्सकहरुले बताउने गर्छन् । विभिन्न अध्ययनकाअनुसार धेरै गर्भपतन, गर्भनिरोधक चक्कीको जथाभावी प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण, असन्तुलित खानपान, अनिन्द्राजस्ता कुराले पनि बाँझोपनको समस्या निम्तायने भएकाले यसतर्फ सचेत रहनु आवश्यक छ ।
२५ देखि ३० वर्षको उमेरमा विवाह गर्नु सन्तान प्राप्तिका लागि उपयुक्त उमेर मानिन्छ । यही उमेरमा विवाह गर्ने, जंकफुड नखाने, प्रदूषणबाट बच्ने, स्वस्थ जीवनशैली जिउने, तनावमुक्त हुने, अस्वभाविक मटोपन हुनबाट जोगिन, यौनरोग लाग्न नदिने, मद्यपान तथा धूमपान नगर्ने, पोषिलो र स्वास्थ्यवद्र्धक खानेकुरा खाने । साथै हरियो सागसब्जी र फलफूल, दही दूधमा खाने बानी गर्नुपर्छ ।
बाँझोपनको समस्या भएका दम्पत्तिले पनि सन्तान प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यसका लागि स्वास्थ्य परीक्षणपछि सोहीअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँझोपनको समस्या भएकी महिलाको सबैभन्दा पहिला महिनावारी भएको दास्रो वा तेस्रो दिनमा हार्मोनको जाँच, भित्री अल्ट्रासाउन्डद्वारा अण्डाको जाँच, पाठेघरको झिल्लीमा क्षयरोग भएको हो या होइन परीक्षण, दुरबिन प्रविधिद्वारा पाठेघरको भित्री भाग तथा नलीको जाँच, रगतको सामान्य जाँच र यौन सम्पर्कपछि शुक्रकीटको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बाँझोपन के हो र किन हुन्छ ? महिला र पुरुष दुवैमा समस्या
यस्तै पुरुषको वीर्यको विशेष परीक्षण, आवश्यकताअनुसार टेस्टिकुलर बायोप्सी गर्ने, हार्मोनको परीक्षण र रगतको सामान्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसपछि निःसन्तान दम्पतिलाई चिकित्सकले परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलामा अन्डाको मात्रा बढाउन र ओभुलेसन गराउन गोनाडोत्रोफिन औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषका लागि भने शुक्रकिटको मात्रा बढाउन मद्दत गर्ने ऐन्टी अक्सिडेन्ट, भिटामिनसहितका औषधि सेवन गर्नु पर्छ ।
साथै आइयुआई र आइभिएफ प्रविधिबाट पनि सन्तान प्राप्त गर्न सकिन्छ । आइयुआई विधिमा पुरुषको विर्यलाई चालेर महिलाको पाठेघरमा सिधै राख्ने गरिन्छ । यस विधिबाट सन्तान प्राप्त गर्न करिब २० प्रतिशतमात्रै सफल हुने चिकित्सक बताउँछन् । यो विधि चारदेखि ६ पटकसम्म गर्न सकिन्छ।
आइभिएफ प्रविधिमा भने महिलाको डिम्बासयबाट डिम्बलाई अलग गरी शरीर बाहिर ल्याबमा पुरुषको शुक्रकिटसँग निषेचित (फर्टिलाइज) गरेर तयार भएकोे भ्रुणलाई महिलाको पाठेघरमा प्रत्यारोपित गरि गर्भधारण गराएर बच्चा जन्माउने गरिन्छ । यो करिब ४०–५० प्रतिशत व्यक्तिमा सफल हुने मानिन्छ ।
माघ ७, २०७७ बुधवार १८:१९:१२ बजे : प्रकाशित
नेपालमा थप ३२२ जनामा कोरोना संक्रमण, ६ जनाले गुमाए ज्यान
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३१८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका ३१८ सहित कूल संक्रमितको संख्या २ लाख ६८ हजार ३ सय १० पुगेको छ ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ३८३ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ६२ हजार ६ सय ४२ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भारतले १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धकाे खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने
मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ६ सय ९३ रहेको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जना कोरोनाभाइरस संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १,९७५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
माघ ७, २०७७ बुधवार १६:४७:४६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना भाइरस (कोभिड १९)विरुद्धको खोप अनुदान दिएको छ ।
काठमाडाैँमा बुधबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतले १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन् ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सहभागी संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार अनुदानको खोप बिहीबारदेखि नै आउन थाल्नेछ ।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई दिइने मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।
केही दिन अघि नेपाल सरकारबाट कोभिसिल्डले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको थियो ।
माघ ७, २०७७ बुधवार १४:३२:२१ बजे : प्रकाशित
चाँया के हो, किन पर्छ ?
काठमाडौँ। चाँया, टाउकोको छालाबाट झर्ने वा पाइने मृत कोशीकाहरु हुन्। छालाको कोशीकाहरु मृत भएपछि थोरै मात्रमा देखिनु वा कपालबाट झर्नुलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ। मानिसको टाउकोबाट करिब ४ लाख ८७ हजार कोशीकाहरु डिटर्जन्ट उपचारपछि सामान्य रुपमा झर्ने गर्छ। तर, जब यो ज्यादा मात्रामा देखिन वा टाउकोबाट झरना थाल्छ, त्यतिबेला यसलाई खतराको रुपमा लिनुपर्दछ।
अतः बद्लिदो मौसममा चाँया पर्नु सामान्य भइसकेको छ। अहिलेको वर्तमान परिवेश र खानपानका कारण ८० प्रतिशत मानिसहरु चाँयाको समस्याबाट प्रभावित छन्। विशेषगरी जाडो मौसममा तालु सुख्खा भएको कारण चाँयाले मानिसहरुलाई असर गरेको पाइन्छ ।
उमेर - चाँया सामान्यतया युवा अवस्थामा सुरु हुन्छ र मध्यम उमेरसम्म जारी रहन्छ। यसको मतलब यो होइन कि वयस्कहरूलाई चाँया हुँदैन। केही व्यक्तिहरूमा यो समस्या आजीवन हुन सक्छ।
पुरुष हुनु - मुख्यतया, पुरुषहरुमा चाँया हुने समस्या बढी देखिन्छ। जसकाकरण, विज्ञहरुकाअनुसार पुरुषहरुको हर्मोन्सले यसलाई उत्पादन गर्न बढी भूमिका खेल्ने विश्वास गर्छन्।
रोग - पार्किन्सन तथा स्नायु प्रणाली सम्बन्धी रोग भएका बिरामीहरुलाई चाँयाले बढी असर गर्ने गर्छ। त्यसैगरी, प्रतिरक्षा प्रणाली कम भएका र एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुलाई चाँया पर्ने समस्या हुने गर्दछ।
माघ ७, २०७७ बुधवार १३:०९:०६ बजे : प्रकाशित
# किन पर्छ
महिला र पुरुष दुवैमा समस्या
बाँझोपन महिलामात्रै हुने भन्ने गलत धारणा सामाजमा रहेको पाइन्छ । तर, पुरुषमा पनि बाँझोपनको समस्या हुनेगर्छ । तर, बाँझोपनका प्रकार महिला र पुरुषमा भने फरक फरक हुन्छन्।
महिलामा मानसिक तनावका कारण आन्तरिक हार्मोनमा गडबडी, अण्डबाहिनी नली बन्द हुनु, डिम्बाशयमा पनि गडबडी, पाठेघरको झिल्ली पातलिनु, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुने जस्ता कारणले बाँझोपनको समस्या महिलामा देखिन्छ ।
यस्तै अत्यधिक मात्रामा धूमपान र मद्यपान सेवन, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय शुक्रकीट नहुनु, शुक्राणुको संख्या कम हुनु जस्ता कारणले पुरुषमा बाँझोपन देखिने गरेको छ ।
विभिन्न कारणले बाँझोपनको समस्या देखिन्छ । खानपान, जीवनशैली तथा शारीरिक अवस्थाका कारण पनि बाँझोपनको समस्या देखिने गर्छ ।
महिलाको महिनावारी गडबड हुने समस्या पनि बाँझोपन हुनेको कारण मध्ये एक हो । नियमित महिनावारी नहुँदा डिम्ब निष्काशनमा गडबडी हुने गर्छ ।
जन्मजात महिलाको पाठेघरको विकास नहुनु र पाठेघरको संक्रमण पनि एक कारण हो । यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग, क्ल्यामाइदिया, गोनोरहिया जस्ता संक्रमणले गर्दा पाठेघर, डिम्बवाहिनी नलीका इन्फेकसनले डिम्बवाहिनी नली बन्द हुन जान्छ।
जस कारण गर्भ रहने सम्भावनालाई कम गर्छ । पाठेघरको ट्युमर्सले पनि बच्चा बस्न दिँदैन । पहिलो शिशु नजन्माई गर्भपतन गराउनु पनि कारण हो ।
यस्तै पुरुषको वीर्यमा हुने शुक्रकिटको मात्रा कम हुनु, शुक्रकिट स्वस्थ नहुनु वा शुक्रकिट नै नहुनुु, विर्यनलीमा सिस्ट र ट्युमर भएमा पनि गर्भ रहँदैन ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार १८:१०:२५ बजे : प्रकाशित
# महिला र पुरुष दुवैमा बाँझाेपन समस्या
काठमाडौँ। काठमाडौँ। काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३४८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका ३४८ सहित कूल संक्रमितको संख्या २ लाख ६७ हजार ९ सय ९२ पुगेको छ ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ४४१ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ६२ हजार २ सय ५९ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ७ सय ६४ रहेको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ४ जना कोरोनाभाइरस संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १,९६९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार १६:२१:२६ बजे : प्रकाशित
# गुमाए ज्यान